Zirignon Grobli, abuuraha cilmu-nafsiga - Afrikhepri Fondation
Zirignon Grobli, curiyaha cilmu-nafsiga
min aqri 6 min
Zirignon Grobli, oo ah khabiirka cilmi-nafsiga
Lcilmu-nafsi-nafsi waa fikrad ka kooban laba eray: psycha oo ah soo gaabintii cilmu-nafsiga iyo terabiga farshaxanka. Iyada oo la abuurayo fikradan waxaan doonayay inaan caddeeyo xiriirka labada edbbiyeed ee aan kaga qeyb qaato: cilmi nafsiga iyo farshaxanka. Daaweynta lafa-gurista ee dhibaatooyinkii noloshaydu igu kalliftay inay i bartaan ayaa waxay i tusiyeen xadka daaweynta. Markaa waa dabiici dabiiciyan ah inaan xiiseynayay farsamada farshaxanka si aan u baaro goobta preverbal oo aan dan ugu jirin cilmi nafsiga. Oo, waa sababta oo ah waxaan u arkaa wax qabad farshaxan sida dhameystirka lagama maarmaanka u ah cilmu-nafsiga in aan u haray ereyga-cilmi nafsi.
Tayadaada waxaa sii dheer tayadaada cilmi nafsiga, inta badan waxaa laguugu magac daray magacyada waaweyn ee sawirka sawir gacmeedka ee Cote d'Ivoire. Miyaad ku andacootaa tayada rinjiga ee laguu sheego?
Tani ma aha jacaylka rinjiyeynta igu soo hoggaamiyey in ay soo saaraan noocyada taageerada farshaxanka yiri. Waa jecel yihiin in ay muujiyaan falalkooda aan, si ay u guuraan si ay dusha sare ah iyo in la ogaado macnaha kuwaas oo foomamka in lidiga ka hadal ah free of my dago qaado (isticmaalaya aan nuurad lahayn, pastels iyo qalab kale le'atay ii soo gacangelinaysaa) in ii keentay inay u dhaqmaan sida Ranjiilayaasha. Laakiin daacadnimo oo dhan ayaan marnaba ku fekerin rinjiile ah, waa dad kale oo ay dareemaan in maxaan sameeyaa waa rinjiga. Ka sokow in Grapholies (1993), qaar ka mid ah uu doonayay in uu ii saaro waa kuwan madaxda bandhiga og shaqadayda, ayaa lagu soo rogay. xeerbeegtida ee bandhiga loo arkaa in wixii aan ka sameeyo waa nooc ka mid ah rinjiyeynta oo i sameeyey sharaf ii ka hormariyaan (qiimaha of Nations). Waa inaan sheegaa in Academy of rinjiyeynta, halkan sida ee France, mar walba aniga qudhaydu rinjiile yahay iyo ugu horeysay ee (1976) aan loo arkaa waxaan arkay aniga qudhaydu abaal "Prix Louis Dumoulin" asalnimada Exhibition Caalamiga ah ee Fine Arts of Qaraqmeen Grand ah. Sidaas daraaddeed waxaan halaagsameen i qaadashada for rinjiile ah, laakiin rinjiile ah kan tahay ugu horayn mas'uul ka sheegay inuu miyir iyada oo la dhiirigelinayo foomamka preverbal waa: xubno dastuurka luqadda Hawsha waa in "bulsho" xiriirada uu dadka kale.
Waxaad inta badan sheegeysaa in sawirrada aad soo saari karto ay yihiin matalooyinka qoraallada awoowayaasha. Tani macnaheedu maahan inaad tahay turjumaan kuwan ka mid ah, aduunka aduunka tayo sare leh?
Markii aan ku soo bandhigay Grand Palais, oo horay uga mid ahaa kuwii la socday, waxay ku dhufteen farsamoyinkayga, waxay i waydiiyeen haddii aan ogaa in rinjiyeyntaydu ay wax ka qabatay sawirkii hore. Waxaan ku jawaabay in isbarbardhigga ay igu dhufteen iyo in aysan ka imanin rabitaan miyir leh si loo soo saaro sawirrada guluubka. Waa ka dib markii aan si qarsoodi ah u sawiray sawirka aan ku ogaanayo ka dib, sida ay u egtahay shaqooyinka aasaasiga ah. Marka aan turjumayo baahida hal-abuurka ah, waxaan u maleynayay in aan ka jawaabay wicitaankii awoowayaasha iyo in farsamooyinka aan isticmaalayo ay tahay habka igu horseeday inaan la kulmo.
Sida ku qoran, rinjiyeynta waa luqad. Muxuu yahay luqad aad ku wareejineyso rinjiyeyntaada oo fasiraadiisu aysan ahayn mid sahlan adigoon caawinaad laheyn?
Waa inaan halkan kuugu sheegaa in magacaygu yahay Zirignon, oo macnaheedu yahay taageeridda jinniyo. Waddanka Akan waxaan ku hadli karnaa Komian. Ogoow in si miyir la’aan ah ay ii saameysay magacan aan ka helo asalka hal abuurkeyga. Aniga ahaan, run ahaantii, waxaa loola jeedaa gudbinta jinniyooyinka igu nool mujtamaceena iyada oo la marin habaabinayo qaababka preverbal. Waxaan ku hayaa aragti ah in ruuxa awoowayaashu ay soo nooleyn karaan oo ay ii doorteen inaan fuliyo shaqada tahriibka. Waxaan aaminsanahay inaan ahay aaladda aaminka ah ee dadka waaweyn ee doonaya inay ku soo noqdaan dunidan oo ay sii wadaan inay gutaan shaqadooda ah tiirarka bulshada. Marar badan waxaan isku dayay inaan ka caroodo masiirkaas oo iga horjoogsada inaan u noolaado sida kuwa kale, laakiin waxaan ku dhammaaday gudbinta maxaa yeelay waxay ku hanjabeen inay i caajinayaan oo ay iga dhigayaan waalli. Ka sokow, waligey igama soo jiidan “nolosha adduunyo”.
Miyaadan dareentaa inaad dareentay inaad tahay wax aan laga fahmin munaasabadahaaga?
Maya, su'aashan aniga iima khusayso. Kaliya waxaan fuliyaa hadafkeyga. Waxa ugu weyn aniga ahaan waa qanacsanaanta gudaha (oggolaanshaha awoowayaasha), oo aan la kulmo. Laakiin waa inaan dhahaa in badan oo ah waxa aan sameeyo oo aan weyddiisto inaan iibsado, kuwaas oo aan guud ahaan diido marka laga reebo xaalado gaar ah oo aanan u baahnayn inaan halkan ku qeexo, maxaa yeelay shaqooyinkani waa tusaalayaal awoowayaashii, sidaa darteed waa muqadas. Haddii aadan aqoon, ogow in, wiilkeyga, kan aadka u halgamaya Ke Williams, aan hadda ka shaqeynayo dhismaha 'aqal awoowayaasha' (matxafka cilmu-nafsiga), oo ah shaqo cibaado u leh aabayaashii aas aasay. bulshada aadanaha. Waxaan dareensanahay in dhibaatada ku haysata ilbaxnimada ilbaxnimo ee faa iidada iyo macaashku aysan ku xirneyn Xadgudub ama xitaa burburka aasaaska.
Maxaa ka dambeeyay kaftankaaga "cilminafsi-nafsi waa farriinta aabihii dhintay ee uu ka warramay Grobli Zirignon"?
Waxaan rabay inaan idhaahdo waxaan ahay kaliya aaladda fudud ee Codka aabayaasha: a zirignon oo fuliya aayahiisa.
Fikraddaada, maxay tahay farqiga u dhexeeya daaweynta farshaxanka iyo daaweynta maskaxda, laba erey oo loo isticmaalo badan markaan kula hadlo?
Waxa aan ahaa qofka soo jeediyay fikradda daaweynta farshaxanka ee Dakar symposium ee 1998. Anigu weli si buuxda uma fahmin xiriirka uu la leeyahay psychoanalysis. Waxay ahayd markii dambe inaan fahamsanahay in daaweynta farshaxanka ay uur leedahay sidii loo kordhin lahaa iyo sii xoojinta beerta nafsaaniga ah, waa in si haboon, loo yaqaan "psychart-therapy".
Ma runtii miyaad u malaynaysaa in daaweynta nafsaaniga ahi ay tahay anshaxa oo laga heli karo xal waara oo su'aasha ah ee rabshadaha Côte d'Ivoire iyo adduunka?
Xaqiiqdii anigu sidaas ayaan u malaynayaa mar walbana waan sii sheegayay. Waxaan hayaa bukaanno noqday xer xerooyin oo kugu ammaani doona teraabiyada cilminafsiga (psycho-therapy) sidii daawo looga hortagi lahaa waxyaabaha burburka leh iyo bilowga "wada noolaashaha".
Sidee ayaad ugu talagashay inaad ku dhaqaaqdo sameynta anshax marinta dhammaan dadka oo dhan?
Waxaan qoray ku dhawaad ​​labaatan buug oo mowduuca ku saabsan, waxaan sameeyay fiidiyooyo waxaanan siiyay waraysiyo. Xitaa waxaan aasaasey qaab dhismeedka cilmi baarista iyo tababarka: ARFAT oo aan ku hogaaminayo seddex bukaan oo hore u heellan Sababta. Waxaan dareemayaa inaan sameeyay qaybtayda oo kubadduna ay ku taal maxkamadda go'aannada. Waxaan diyaar u ahay inaan tababro cilmi nafsi-nafsi haddii la i weydiiyo, inaan gacan ka geysto dib-u-dhiska "tuulada adduunka" oo ay ku hanjabeen rabshado duminta dhammaan nooc kasta. Waxaan kugu kalsoonahay inaad iga caawiso sidii aan u fulin lahaa codsigayga si aan u sii adeego.
Ereygaagii ugu dambeeyey
Waxaan jecelahay inaan u ogeysiiyo akhristayaashaada in wiilkeyga "Ké William iyo anigu aan abuurnay koox facebook ah dhiirigelinta daaweynta teraabiyada cilmu-nafsiga iyo dhismaha buulshada qadiimka ah. Waxaan codsanayaa xubinnimadooda kooxdan. https://www.facebook.com/groups/1009259752487312/?fref=ts
Wareysiga Zirignon Grobli ee Konaté, saxafiga
3 cusub oo ka yimid € 5,62
Iibso 5,62 €
laga bilaabo Sebtember 18, 2020 6:07
Ma Waxsoosaarka Dadka Waaweyn
Taariikhda lagu sii daynayo 2016-06-27T00:00:01Z
Publication Taariikhda 2016-06-27T00:00:01Z
Toddobada Sirta ee Guusha - Richard Webster (Audio)